Cabdi yare oo ay la socdaan laba qof oo midkood dumar tahay ayaa soo galay xarunta danbi baarista waxa uu fariisiyay xafiiskiisa kadib waxa uu usoo galay Dhiirane iyo Maaddey oo su’aalo weydiinayo nin kamid ah odayaashii shirkada la ahaay marxuumka …
Cali Yare: asc
Dhiirane: ws ahlan Cabdi Yare !
Cabdi Yare: ma idin heli karaa labadiinaba waa idin rabaaye?
Dhiirane iyo Maaddey ayaa soo istaagay
Dhiirane: maxaad soo aragtay?
Cabdi Yare : waxaan soo arkay ? mise waxaan la soo kulmay
Maaddey: waa isku mid kiiye muggoo warjeclida lama goodlaha naga daaye ka soco oo wax noo sheeg …
Cabdi Yare: dhammaan xarumaha ganacsiga ee ku yaalay isgoyska waxii Cammera CCTV ah ee ku rakibnaa waxii ay saaka duubeen horteey ayaa la aruursaday …
Dhiirane: oo yaa aruursaday oo baas?
Cali Yare: laba nin oo sheegatay in ay yihiin saraakiil nabad sugidda ah !!
Maaddey: kuwaan noo xiran miyaa mise waa kuwa kale?
Cabdi Yare: magaranayo waase la ogaan, waxaan horay usoo kaxeeyay laba kamid ah milkiilayaashii xarumaha ganacsiga … bal in ay gartaan nimankaan noo xiran iyo in kale ..
Dhiirane: si fiican ayaad yeeshay ee inoo geey …
sadaxdoodi oo wada socdo ayaa usoo galay labadii qof ee uu Cabdi yare soo watay …
labadii qof: ws ayey mar qur ah kuwada jawaabeen …
Dhiirane: wax dhib ah majiro … idinkana cid danbi idiin haaysato majirto … waxaan rabnaa ragga aan idin tusi doonno inaad noo caddeysaan in ay ku jiraan iyo in kale … kadibna mehradahiinii ayaad ku laabaneysaa …
Haweeya : ( oo ah milkiilaha xarun ganacsi) walaalow dhibaato naga dheer hanoo soo jiidin saaka waxa meesha ka dhacay ma ahan waxa aan ka bixi karno ….!!!
Dhiirane: walaashey magacaa?
Haweeya: Haweya Muuse ayaa ley dhahaa …
Dhiirane: haweeya cidi kuma haaysto, nimankana isma arkeysaan … adiga unbaa arkayee ayaga kuuma jeedi karaan … kaalay halkan soo istaag ….
qol hool balaaran ah oo dhexda darbi muraayad ka sameeysan lagu kala xiray ayaa lasoo galiyay, Cabdi yare dhinac ayuu istaagay, Maaddeyna dhinaca kale ayuu istaagay, Dhiirane oo ay la socdaan Haweya iyo ninkii kalee ayaa lasoo istaajiyay dhankii uu Maaddey taagnaa ..
Dhiirane: haye muraayadda gadaasheeda yaa taagan?
Haweeya: wiilkii meeshan na keenay
Dhiirane: Cabdi Yare ayaa la dhahaa … ninkanna Maaddey ayaa la dhahaa … ee na keena Cabdi yare aan u tagnee ..
halkii Cabdi yare uu taagnaa ayaa lasoo galay waxaa lagu yiri maxaad ujeeddaa?
Haweya: (oo muraayadda iska dhex aragtay oo garbasaar toostoosin bilaawday ayaad tiri waa innagii un ee aaway Maaddeygii?
Dhiirane: Maaday asagaa noo jeedo laakiin anaga uma jeedi karno … marka nimanka halkan ayaan soo istaajinaynaa … idinkana halka uu muuddey taagan yahay ayaad istaageysaan … idinku waad arkeysaan ee iyagu idin ma arkayaan ee maxaad ka qabtaan inana howsha guda galno?
Haweeya iyo ninkii la socday ayaa is dhugtay iyagoo midba kan kale uu geesinimo ka radainaa ama inuu jawaabo ka sugaayo ayaa hal mar haye tacbaan ah kaso go’day …
Cabdi Yare ayaa markiiba qolkii kasoo saaray labadii nin iyo sadax kaloo horay meesha ugu xirnaa, kadibna shantoodi oo isku dhafan ayuu saf galiyay…
Dhiirane, Maaddey iyo labadii ganacsato ayaa dhanka kale isa soo taagay, markii ay eedeysanayaasha isha mariyeen ayuu ninkii ganacasadaha ahaa sheegay in midig marka laga tiriyo ninka labaad iyo kan afraad ay ahaayeen raggii saaka ugu yimid dukaankiisa ee isugu sheegay in ay nabadsugidda ka socdaan, halka haweeya ku waafqaday kan afraad laakiin sheegtay in uu nin kaloo hadda aan meesha ka muuqan uu la socday ….
Dhiirana: ma hubtaa Haweeya ?
Haweeya: haa waan hubaa ….
Cabdi yare waxa uu qolalkoodi ku celiyay maxaabiistiii …
dhiirane: Haweya maxaa lagaa qaatay oo daatada kuugu jirtay?
Haweya: laba hardiski oo kiiba yahay kun GB oo ay ku jirto datada lixbilood ku dhawaad ..
Dhiirane: haye adigana maxey kaa qaateen?
Sahal (oo ah ganacsadahii kale ee Haweya lala soo kaxeeyay): hal harddiski oo kun GB ah oo cusub oo aan shalay un ku xirnay … waayo anaga xaruntayna halkan waa laan siyaasadda shirkaddana waa in harddiskigii buuxsamaba loo sii qaadaa xarunta weyn….
Dhiirane: Ok … idinkoo mahadsan waad fasaxan tihiin ….
sadaxdii sarkaal shir degdeg ah ayey u fariisteen si ay u qiimeeyaan dhacdooyinka iyo sida ay wax u socdaan …
Dhiirane: haye maxey idinla tahay?
Maaddey: nimankan haddii aysan meel kale kaga imaanin , halkan lama aysan soo galin wax muuqdo oo laga shakin karo …
Cabdi Yare: markii ay soo galayeen ma wateen wax baabuur ah?
Maaddey: taas waa inaan waardiyaha weydiiyaa …
Dhiirane: u yeer ciddii markaas iridda joogtay …
Maaddey markiiba waxa uu wacay ninkii usoo sheegay in ay rag nabad sugidda ka socdo u joogaa …
Tima jilic (isagoo salaanta ciidanka iyo cagta dhulka isku daray): haye taliye …
Maaddey: nimankii aad maanta duhurkii iisoo deyneysay ma lug bey ku yimideen mise baabuur ayaa waday?
Tima jilic: Nimanka sadax nin bey ahaayeen baabuur Taxi ah oo jaala ah ayey saarnaayeen, boorso ay wateen oo ay diideen inaan baarno markii aan u diidnay in ay lasoo gudbaan sadaxdoodi midbaa haray oo gaarigii ku laabtay …
Dhiirane: wax sumad ah oo gaarigaas lagu garan karo ma sheegi kartaa?
Tima Jilic: haa taliya … taarika numberkiisana waa qoray number oo far waaweyn ku qoran oo ah 122 iyo xarafka V ayaa sumad u ahaa taxiga …
Cabdi Yare: baraafoo caleyk timajilic …. sargaalnimadaada waa banaanka …
Dhiirane: soo aniga hadda ka hor idiinma dhihin wiilkaa yar mustaqbal buu leeyahay … timajilic adigoo mahadsan fadlan lasoo orod waxii aad qortay …
Timajilic oo markaan la liicayo culeyska farxadda hayso ayaa mar kale is giijiyay salaan dhag kasiiyay horayna usii baxay …
Cabdi Yare: waxaan maqli jiray meeshuu Ilaahay wax kawado dameero geesa leh baa la arkaa …
Maaddey: (oo qosal ka wreegay): Cabdi Yare saaxiibow maahmaah xumidaan kugu nacay waxiis Ilaahay wato waa imaanayaan dameero geesa leh oon waligood arkin iska dhaafe lo’da geesa weynta waamo Ilaahay waxba ma uga baahno waxiis muujinaa waa muujinaa ….
Cabdiyare: Maadey saaxiib mukulaal iyo dooli aad nagu wareerisay maalin walba yaa kaa maahmaahyo xun ?!!
Dhiirane: dhalinyaro waa dhalinyaro meelwalba oo aad joogtaan iyo xili walba oo aad joogtaan makaftameysaan?… wallaahi aniga saaka ilaa hadda oo shantii galabnima ah sidii uu shilka u dhacay koob biya ah igama dagin caawana saan u seexan allaa og …
Cabdiyare iyo Maaddey oo xishood dareemay ayaa kala aamusay …
la soco qeybta 8aad iyo talaadada danbe
Fatahaadda Buulo-burde oo Kala Xirtay Isku Socodka Xaafadaha
Maamulka Shabellaha Hoose oo Furaya Waddooyinka u Xiran Al-shabaab